Iincwadi ezi-5 zekhulu leminyaka leRussian Revolution Uvavanyo nohlalutyo | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Uvavanyo, I zi ganeko, Iincwadi, Inoveli
Inyanga ezayo ye Oktobha i I-100 iminyaka inyani ebalulekileyo kwimbali yekhulu lama-XNUMX elidlulileyo: Uhlaziyo lwaseRussia. Ewe, indawo yokupapasha igcwele izihloko ngaye. Inkqubo ye- iincoko zakudala kunye nohlalutyo lwembali lweziganeko zayo kunye nabalinganiswa Eyona nto ifanelekileyo nefuthe.
Wonke umntu onomdla kwisifundo, nantsi ke ngoku izihloko ezintlanu iyavela Ezikumqolo wokuqala weeshelfu kunye neefestile zevenkile zazo zonke iivenkile zeencwadi. Ngaphezulu kwesinye kufanele ukuba sibajonge okanye, kunoko, sifunde kakuhle. Ixesha elithile ngoku uLenin kunye nenkampani baye bavuswa kakhulu. Masibone.
1 Uqeqesho lukaLenin-uCatherine Merridale
2 Uvukelo lwaseRussia - uChristopher Hill
3 Iileta ezivela kuQhushululu lweBolshevik- uJacques Sadoul
4 Uhlaziyo lwaseRussia. Umzi mveliso woluntu olutsha -UMaría Teresa Largo Alonso
5 Uqhushululu lwaseRussia - uRichard Pipes
Uloliwe kaLenin -UCatherine Merridale
UCatherine Merridale uphakamisa ukutolikwa okutsha kwezi ziganeko kunye nabalinganiswa babo. Phinda uphindeUqeqesha uhambo olwenziwe nguLenin kunye nabalingane bakhe kwinqwelomoya etywiniweyo ukusuka eJamani ukuya ePetrograd. Urhulumente waseJamani uthathe isigqibo sokunceda iqela labavukeli elaligxothiwe eSwitzerland ukuba libuyele eRashiya kwaye liyokunceda ukulikhupha emfazweni. Ke ngoko, akufika apho, uLenin woyisa iinjongo zabo bafuna uguquko baphele ngokumisela iriphabliki yoohlohlesakhe. Injongo yayo: ukudlulela kubusoshiyali, ukuya kuluntu olungenakubalwa nolungenabala.
UMerridale naye ibalisa izimvo zabo babona olo hambo. Kuba zazisuka kwabo babecinga ukuba uLenin usuka kwisidenge ukuya kwabo bakholelwa ukuba uza kuvalelwa okanye adutyulwe nje akufika. Ngokucacileyo zombini zazingalunganga.
Uhlaziyo lwaseRussia - UChristopher Hill
Le ncwadi ngumbhali-mbali uChristopher Hill ngu zakudala zakudala malunga nesihloko. Ifunyenwe kwimeko yekhulu leminyaka. Wazama ukuseka indawo uLenin afanele ukuhlala kuyo embalini "kunye neRevolution eyayingumsebenzi wobomi bakhe." Kwangelo xesha, sisingeniso esingabalulekanga kwinto eyayithethwa yiRussian Revolution ngokwayo.
Iileta ezivela kuQhushululu lweBolshevik -UJacques Sadoul
El ubungqina bomntu wokuqala ngukapteni wase-France, igqwetha, ezopolitiko kunye nombhali uJacques Sadoul kukuzibonela ngokwenyani iinyani.
Ngexesha leMfazwe Yehlabathi I igqiza laseFrance laya eRashiya ukuya kufumana inkxaso yezomkhosi ngokuchasene ne-Entente. Xa kwaqhambuka iMvukelo ka-Okthobha, uSadoul wala ukubuyela eFrance Waqala ukusebenzisana kwintlangano ye-Red Army. Wayengomnye wabaphembeleli boqhushululu ngokuchasene nokuthinjwa kwe-Ukraine e-Ukraine kwaye waba ngomnye wabakhuseli abakhulu kulawulo lobukomanisi.
USadoul wayenjalo umseki weQela lamaKomanisi laseFrance kunye ne Umntu ophikisanayo ngaphakathi nangaphandle kwakhe. Umgqatswa kunyulo lobongameli, ugwetyelwe ukufa yinkundla yezomkhosi kwaye uhlala engqongqo kwizigqibo zakhe zopolitiko nezabantu.
Uhlaziyo lwaseRussia. Umzi mveliso woluntu olutsha -Umaria Teresa Largo Alonso
Lo njingalwazi yeJografi kunye neMbali yeMfundo yesibini usinika esi sihloko apho ihlalutya uloyiso lotshintsho olufuna umbono wentlalo enobulungisa nengalinganiyo kwilizwe elikhulu, elibuyela umva elaliyiRussia ngasekupheleni kwenkulungwane ye-XNUMX. Utshintsho olwaqala ukubeka iqela elimele abasebenzi kwiLizwe eliKhulu kwaye lasasaza imodeli yalo kwihlabathi liphela. Kodwa iimfazwe ezilandelelanayo zenkulungwane yama-XNUMX kunye nokuhamba kwabo ngoozwilakhe kungekudala kuzitshitshisile iinjongo zohlaziyo.
Isahluko esinikezelwe kwindima yabasetyhini sibonisiwe Kwinguqu, zombini ezo zodidi oluphezulu kunye nezabasebenzi.
Uhlaziyo lwaseRussia -Richard Imibhobho
Imibhobho, mbali-odumileyo odumileyo eRashiya yangoku, eyapapashwa ngo-1992 esi sihloko soguquko, kuba, kubagxeki abaninzi, esingekadlulwa. Bawuchaza njengobalulekileyo kwaye obonwabisayo ngenxa yokubaliswa kombutho ojolise kuwo "kukuguqula umhlaba ujonge phantsi," ngokukaTrotsky. Imibhobho ichaza inguquko yengqondo kunokuba ibe yeklasi enye, Iphawulwe kwasekuqaleni uloyiko kunye nezinto eziqhelekileyo zokubhukuqwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iincwadi » Iincwadi ezi-5 zekhulu leminyaka leRussian Revolution. Ukuvavanywa kunye nohlalutyo
Kunjalo. Imvume yam nokuqhwaba izandla. Imibuliso, Joaquín.
Ngaba ubuyazi iProjekthi yamaBali amaFutshane?